Voalohany daty ireo dia afaka ho mampatahotra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, indrindra raha ny amin'ny fanaovana izay tsara fahatsapana voalohany. Raha ny daty voalohany Azo inoana fa raha tsy misy hitch, misy zavatra tokony tsy ny olona rehetra, rehefa avy naka vehivavy ho daty voalohany.
Aza Efa Asehoy Up Tara
Ny hoe marim-potoana ny daty voalohany dia tsy maintsy tanteraka. Mampiseho ny ho tara ny daty no hanome ny daty diso fahatsapana. Ary mety hahazo ny fahatsapana fa tara foana ianao, fa tsy manome lanja azy mba hampiseho ny ara-potoana, na, mandra-tonga, Mety hieritreritra izy dia efa nitsangana. Na izany na tsy izany, izany dia voafatotra hametraka azy sorena ary mety hanome taratasy maharikivy ho amin'ny fiandohan'ny ny daty. Raha toa ka manana ny hampisehoana ny tara noho ny hery mihoatra noho ny fanaraha-maso, ho azo antoka hoe ny daty ianao hamela ny hahafantatra na, raha misy aminareo tsy manana finday, hiantso ny trano fisakafoanana na toeram-pivoriana, mba hahafahany aoka hahafantatra.
Aza Asehoy Up Disheveled sy ny Dirty
Zava-dehibe ny manome fotoana ampy ny tenanao eo anatrehan'ny daty mba freshen ka mijery ny tsara indrindra. Raha mampiseho hatramin'ny daty voalohany mijery shaggy, unkept, ary izay fanimboloana funky, ny daty dia hahazo fahatsapana diso momba anao. Mety hieritreritra ny daty jerenao rehetra izao avy hatrany ny fotoana, ary efa niova ho eny. Omeo tena nanam-potoana tsara nandro, hanaratra, sy vy ny akanjo. Izany fanampiny antsasak'adiny mety ho ny fotoana ilaina mba hanome ny tenanao ny sisin'ny manintona ny daty efa nitady, ary tsarovy, tsy manana ny fotoana hatao nanadio tafakatra ho daty mety hanimba ho any amin'ny vokatra. A tsara groomed miakanjo tsara ny olona no handresy avy eo ny maimbo be slob isaky ny.
Aza Jereo Other Vehivavy teo anoloan'ny
Raha handeha amin'ny daty vehivavy iray, efa nanolotra ny tenanao ho azy noho ny vanim-potoana ny daty. Noho io, izany no tena avy amin'ny andalana mba ho fanamarinana avy vehivavy hafa fa aoka ianareo amin'ny daty. Izany no tsy mahalala fomba sy tsy azo ekena. Mandrakariva ho variana amin'ny vehivavy hafa mandeha amin'ny dia tena azo inoana fa ho milamin-tsaina, ary ny daty no tena tsy haneho ny fomba fijery anao ho niahy azy. Raha mijery foana ny tsorony amin'ny Blonde mafana amin'ny latabatra manaraka, iray amin'ireo zavatra roa ireo antoka saika hitranga: 1) Ny daty dia hahatsapa tena ratsy ny tenany, nieritreritra izy tarehy na tsy niriana, na 2) Ny daty dia hahazo tena tezitra sy sosotra aminao, manao ho solon'ny ratsy mandeha fiara an-trano sy ny nihena vintana ny daty faharoa.
Aza hanapaka ny Conversation
Rehefa amin'ny daty voalohany, dia mety hahatsapa fa ilaina ny volana ny ankizivavy amin'ny tantara sy mahaliana tidbits momba anao. Tsara izany, fa tsy ianao fotsiny. Tsaroako ny fifampiresahana dia olona roa eo, tsy misy olona miresaka amin'ny hafa. Tena tsara izany hevitra mba hizara tantara mahaliana sy ny eritreritra amin'ny daty, fa ho azo antoka ianao manome azy fotoana ampy mitovy handray anjara amin'ny resaka. Anontanio ny fanontaniana momba ny tenany, izany dia ampisehoy azy fa ianao dia liana ny momba azy amin'ny maha-olona ary homeny ho anareo ny fahafahana hianatra bebe kokoa momba azy.
Aza Whine sy hitaraina
Eny, isika rehetra, dia ny andro ratsy, fa ny daty (indrindra fa ny daty voalohany) Tsy ny toerana iasàny na ny fitarainana rehetra. Mety ho, ny daty dia nanantena manana tsara, fahafinaretana fotoana mihaona izy miaraka aminao. Raha izy dia arahabaina am-'i fifamoivoizana Gosh painÖI hankahala toy izany io dia avy hatrany izy townî niova ho eny. Mitaraina milentika ny manomana ny mpamaky ho ny saina, tsy faly daty. Na dia efa nanana ny andro no fanoratana, tsy handany ny alina whining momba izany. Ho faly fotsiny ho fandaniana fotoana iarahana amin 'ny vehivavy fa mitady ny. Tsiky mpamindra aretina, fa toy izany no frowns. Na izany na fantatrao fa tsy, ny sorena mety hisy fiantraikany ny daty sy ny fomba tsapany momba anao. Tianao ny daty hahatsiarovana anao ho mampihomehy sy upbeat, tsy downer.
Aza tia ady dia salama loatra
Dia tena zava-dehibe ny mamaky ho famantarana ny daty dia manome anao alohan'ny handeha eo ho oroka (na mihoatra). Aza tonga dia mihevitra hoe satria efa nisy daty tsara fa ny daty no vonona handray ny fifandraisana ara-batana ho amin'ny ambaratonga manaraka. Raha liana amin'ny nanoroka ny daty, manomboka eny amin'ny tanana Nihazonako, namihina, ary tsikelikely mampahery ny oroka. Manaja ny daty foana ny fanirian'ny. Raha hoy izy tsy mba misy fandrosoana ara-batana, handray ny valin-teniny amin'ny endrika lanjany sy miala. Ny olona izay tia ady loatra raha ny fifandraisana akaiky no mahasakana ny vehivavy eny, ary tena afaka manao ny vehivavy matahotra na manahy.
Aza Lazao azy Ho Antsoy Ny Raha tsy te-
Filazana ny vehivavy 'miantso aho youî rehefa tsy te-hanao izany dia ratsy hevitra. Raha ny vehivavy liana amin'ny daty faharoa aminao, ny fahadisoam-panantenany dia hankalazana ihany raha miandry manodidina noho ny antso ihany no hianatra fa tsy nanana fikasana ny miantso ny daty faharoa. Raha tsy te-hiantso azy, hamarana ny daty fotsiny amin'ny hoe 'Tena fivoriana tsara ianao na ny kely saina' tsara veloma, manana sisa mahafinaritra ny eveningî. Izany fomba tsy mitarika azy amin'ny fahazoana ny fanantenanao, na ny. Ao amin'ny taratasy tsy maintsy nifindra toerana, raha te-handamina ny daty faharoa, ho azo antoka ianao dia aoka hahafantatra.
Mieritreritra fa mety ho daty voalohany kozatra-wracking, fa ny sasany manaraka toro lalana tsotra raha ny daty dia hanampy mba ho azo antoka ny tsara indrindra azo atao daty. Raha toa ianao ka tia namana, ara-potoana, amim-panajana, ary hihaino, Mety ho ianao sy ny daty dia hanana fotoana sy lehibe, raha manintona dia fifanoloran, ny daty aloha mety ho ny fiantombohan'ny fifandraisana tsara tarehy.